Hunhu Sisitimu - Xiamen Kinghow Kunze Chigadzirwa Chigadzirwa Co., Ltd.
Yako Hunhu Kudikanwa
Isu tinonyatsogona kubata chero ako ehunhu anodikanwa. Isu tave tiri mumusika kwemakore izvozvi neyakagadzwa uye yakatenderwa system uye zvakadaro isu tiri kuramba tichivandudza matanho edu kuzadzikisa tarisiro yevatengi vedu kana zvasvika kune mhando yechigadzirwa.
Saka ndezvekuti mabhegi edu anogona kukwikwidzana neese epasi rose mabhurani senge TOV, CSCV, SGS, TUV uye ITS etc.
OEM inozvipira kune izvo zvinodiwa nevatengi uye isu tinovimbisa mhando yechigadzirwa chedu. Kugutsikana kwako ndiko kwedu kwekutanga kukosha. Kana iwe ukazviwana usiri kugutsikana isu tinokupa iwe nekudzokorora kwechigadzirwa kana kudzorera mari yako.
Kutarisa Mushure mekudzvinyirira Kubva Kumutengesi KuKutarisa
Matambudziko Ekuvimba anoenderana Nezvatiri Kuziva
Zvirinyore kurerutsa pane hunhu kutonga muChina. Zvinhu hazvina kujeka pano sezvo makambani mazhinji anowanzo kupa chiokomuhomwe iyo yechitatu bato yemhando yekudzora. Kuti tidzivise izvo, isu takahaya timu yedu yeQC uye vanoshanda vega pasina chipingaidzo kubva kufekitori. OEM yakave nechokwadi chekuti vari kuita mabasa avo vakatendeka nekutevera mirau yakaoma kwavari isingavabvumidze kupa mumuedzo wekuita imwe mari.
Kudzora Kugadzirwa Kubva Kune Vanopa Kusvikira Kusvikira Pakukopa
Nehunhu isu hazvireve chete hunhu hwekugadzirwa, zvakare zvinosanganisira kudzora kwekupa tisati tatanga kugadzirwa kwakawanda. Kunze kwaizvozvo, ibasa redu zvakare kunyatso kurongedza mapakeji ekupedzisira mumudziyo kuti ununure zvakanaka pasuo rako. Naizvozvo, edu QC nyanzvi chengetedza ziso pane ese maitiro kubva pakutanga kusvika kurodha.
Akasiyana Matanho eiyo QC Maitiro
Basa ravo rinosanganisira kunzwisisa zvaunoda uye kuendesa zvese zvese mumutauro wechiChinese kuimba yekuenzanisira. Ivo zvakare vanotora kufarira mumutengo uye inotarisirwa mhando nhanho nekupa zano rekuvandudza mashoma kukamuri yekuenzanisira.
Matekinoroji edu mukamuri yekuenzanisira anoshandisa yakawandisa nguva pane zvaunoda uye zvakatemwa kuti akupe iwe wakakodzera mutengo unozokubatsira iwe kusvika kune yako tarisiro mutengo. Munguva yekuteedzera, runyorwa rwehunyanzvi makomendi runogadzirwawo rwekugadzirwa kwakawanda.
Uyu ndiwo musangano wepamberi wekugadzira unosanganisira vese mahunyanzvi, zvekutengesa uye QC vari chikamu chepurojekiti yako. Zvese zvese zvine chekuita nezve projekiti yako zvinokurukurwa kureva. Maitiro akaomarara ekugadzira, mapoinzi emhando uye ruzivo rwekutakura.